Dagaal ka qarxay Sanaag kadib markii Somaliland duulaan kusoo qaadey
Kiisaska Coronavirus ee Soomaaliya ayaa gaarey 8 kadib markii qof degan Muqdisho uu soo ritay cudurka. Riix Halkan
GAROWE, Puntland - Dagaal u dhaxeeya ciidamada difaaca Puntland iyo kuwa maamulka Somaliland ayaa maanta oo Arbaco ah ka qarxay qeybo kamida gobolka Sanaag, oo Puntland ay maamusho.
Wararka uu Warsidaha Garowe Online ka helay saraakiisha gobolka ayaa sheegaya in dagaalka uu billowday kadib markii ciidamada maamulka Somaliland, oo ka yimid dhinac Yube ay weerar kusoo qaadeen saakay degmada Hadaaftimo.
Dadka degaanka ayaa soo sheegaya inay maqlayaan rasaas iyo hubka culus oo labada dhinac isku adeegsanayaan, iyadoo ciidamada dowladda Puntland ay iska caabiyeen, islamarkaana dib u celiyeen kuwa kusoo duulay.
Khasaaraha labada dhinac iyo dadka shacabka ah, ayaan wali la ogeyn, maadaama ay adag tahay in la helo xog sax ah oo ku saabsan dagaalka oo la sheegay inuu wali socdo.
Duulaanka ciidamada Somaliland ee Hadaaftimo ayaa imaanaya xilli maalintii shalay uu dagaal ka dhacay degmada Laasqorey oo katirsan isla gobolka Sanaag, kaasoo u dhaxeeyay sida la sheegay ciidamo taabacsan gudoomiyaha gobolka iyo kan degmada Badhan, oo Somaliland soo magacawday.
Somaliland ayaa mudo sanado ah duulaan ku ahayd degaanada hoos-yimaada Puntland ee gobollada Sool iyo Sanaag, xilli beesha caalamka ay waday dedaallada lagu soo afjaro colaadda gaamurtay ee labada maamul u dhaxaysa.
Isu socodkii u dhaxeeyay Puntland iyo Somaliland oo la joojiyay
Puntland 09.01.2018. 11:55
Puntland ayaa ku dhawaaqday in isu socodkii u dhaxeeyay Puntland iyo Somaliland oo la joojiyay...
Korneyl Caare oo ka warbixiyey wada hadalka uu kula jiro Biixi
Somaliland 14.08.2019. 10:14
Waxgaradka SSC "Puntland ayaanu dowlad la dhisanay" [Daawo]
Puntland 29.05.2018. 19:15
Somaliland: Wasiir Koore "Garoowe iyo Laas-caano mid uun baa Qaxaya"
Somaliland 16.01.2018. 19:42
TOOS: Doorashada Madaxwaynaha iyo Madaxwayne ku xigeenka Puntland
Puntland 08.01.2019. 09:27
Waaya-aragnimada Soomaalida eheladooda u dhinteen Coronavirus 08.04.2020. 12:55
Madaxweynaha Somaliland oo ka hadlay dhimashadda Axmed Xudeydi 08.04.2020. 10:35
Qaad la doonayay in badda laga soo geliyo Soomaaliya oo la gubay 08.04.2020. 09:00
Diyaarad ka degtay garoonka diyaaradaha caasimadda Somaliland 08.04.2020. 08:45
Coronavirus: Axmed Cismaan Xudeydi oo ku geeriyooday Ingiriiska 08.04.2020. 08:19
Fahfaahin cusub oo laga soo saarey xaalada caafimaad ee Boris Johnson 08.04.2020. 07:14